Xirmooyinka Ilkaha ee La tuuro, Xirmooyinka Qalabka Ilkaha - Vayu
Alaabada Waxbarida Ilkaha
Unugyada jilidda ilkaha
Nidaamka Barista Dijital ah
Ikhtiyaarrada & qalabka
kamarad afka ah
Qaybta la qaadan karo
Kombaresarada leh sanduuqa aamusnaanta
Raajada dusha sare leh
Raajada Afka Intra
Mashiinka Wax Lagu Xidho
Sinter-diamond & Nadiifiyaha looxa
Burush & Dhagaxtuur
Soosaarka R & D
Had iyo jeer sii Hal-Jooji-Xalka had iyo jeer u tag
SHANGHAI JPS DENTAL CO., LTD waxay siineysay alaabada ilkaha macaamiisha in kabadan 80 wadan iyo gobalo. Waxyaabaheena ugu muhiimsan ee ilkaha waa qalabka ilkaha sida jilitaanka ilkaha, kursiga ilkaha ku rakiban, unug ilkaha la qaadan karo, kombaresarada bilaashka ah iyo otoclave, iwm. Iyo waxyaabaha lakala tuuro ee ilkaha sida xirmada maqaar-galaha, buugaagta ilkaha, waraaqda looxa, iwm.
Our CE iyo ISO13485 waxaa soo saaray TUV, Jarmalka.
GANACSIGA AAD LAGU AAMINI KARO WADAJIRKA SHIINAHA
Guddoomiyaha Ilkaha JPSF600
Kombaresarada hawo aan saliid lahayn
waxaan kugula talineynaa inaad doorato
JPS Ilkaha waxay siisaa alaabooyin la isku halleyn karo iyo One Stop Solution dhammaan macaamiisha.
waxaan hubin doonaa inaad had iyo jeer hesho
Ku dhowaad 20 sano ganacsiga ilkaha iyo caafimaadka
ISO 13485 la xaqiijiyay iyo in ka badan 60 alaabood ayaa leh CE
Taajir ku ah qandaraasyada dawlada
Xalka One Stop ee wax iibsiga oo dhameystiran
ugu dambeeyay daraasad kiis
JPS jilitaanka ilkaha
Tayo Sare Simulator Waxbarista Ilkaha Ee Tababarka Ilkaha
waa maxay dadku way hadlaan
Macaamiisha Ingiriiska ayaa yiri:
JPS Group, iibiyeyaasheena ugu kalsoonida badan ee alaabada qalabka wax lagu qoro. Waxaan ku faraxsanahay tayada adeegyadaada waxaanan ku qanacsanahay ka jawaab celinta iyo xirfadda ganacsiga ee JPS. JPS waa sida lagu kalsoonaan karo waana ku mahadsan tahay tan, waxaan ku guuleysanay inaan macaamiisheenna ku qancino. Waxaan sugeynaa xiriir ganacsi oo sii socda oo heer sare ah.
Macaamiisha Iswiidhan waxay yiraahdeen:
Intii lagu gudajiray faafida fayraska faafa, jahwareer iyo argagax ayaa ku faafay wadamada sababo la xiriira yaraanta qalabka difaaca shaqsiyadeed. JPS way talaabsatay oo waxay la timid sax iyo tayo. Waqti markii ay wax u muuqdeen wax aan macquul ahayn, JPS ayaa suurto galisay. Annaga ahaan JPS waa lamaane nolosha!
Tan iyo markii la aasaasay 11 sano ka hor, JPS Dental waxaa ka go'an inay macaamiisha siiso HAL JOOJINTA XALALKA alaabooyinka la isku halleyn karo kuwaas oo sumcad wanaagsan ku yeeshay warshadaha ilkaha waxayna ka heleen kalsooni qiimo leh macaamiisha adduunka oo dhan.
JPS Group waxay siisaa alaabooyin la isku halleyn karo iyo One Stop Solution dhammaan macaamiisha.
SHANGHAI JPS Ilkaha CO., LTD
C1506, No. 519, Qifan Rd, Pudong, Shanghai, Shiinaha. 200137
Right Xuquuqda daabacaadda - 2021JPS: Dhammaan xuquuqda ayaa la keydiyay.